multilayer circuit board ရဲ့အရင်းအမြစ်အကြောင်းပြောနေတာ - Shenzhen WMD Circuits, Ltd
multilayer circuit board ရဲ့အရင်းအမြစ်အကြောင်းပြောနေတာ
အချိန်: 2015-08-05 hits:
ပေါင်းစည်း circuit ကို packages များ၏တိုးမြှင့်အာရုံစူးစိုက်မှု Interconnection ၏မြင့်မားသောအာရုံစူးစိုက်မှုမှဦးဆောင်, အရာ multilayer ပျဉ်ပြားများအသုံးပြုမှုလိုအပ်ပါတယ်.
ထိုကဲ့သို့သောဆူညံသံအဖြစ်ခန့်မှန်းရခက်ဒီဇိုင်းကိစ္စများ, သွေ capacitance, crosstalk, စသည်တို့ကို. ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်၏အပြင်အဆင်အတွက်ဖြစ်ပေါ်. ထိုကွောငျ့, ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ဒီဇိုင်းကို signal ကိုလိုင်းအရှည်အသေးအဖွဲများနှင့်အပြိုင်လမ်းခရီးရှောင်ရှားအာရုံစိုက်ရမယ်. သိသိသာသာ, Single-တဖက်သတ် pcb ပျဉ်ပြားအတွက်, ပင်ကို double-တဖက်သတ်ပျဉ်ပြားအတွက်, ဤအလိုအပ်ချက်များကိုကျေနပ်ဖွယ်ကြောင့်အောင်မြင်နိုင် Cross-over ၏ကန့်သတ်အရေအတွက်ဖြေကြားမရနိုငျ. အပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့် Cross-ကျော်လိုအပ်ချက်များကို၏ကြီးမားသောနံပါတ်၏အမှု၌, ဘုတ်အဖွဲ့တစ်ခုကျေနပ်စွမ်းဆောင်ရည်အောင်မြင်ရန်အလို့ငှာ, နှစ်ယောက်ထက်ပိုအလွှာဖို့ဘုတ်အဖွဲ့အလွှာကိုချဲ့ထွင်ရန်လိုအပ်သောကြောင့်ဖြစ်ပါသည်, ဤသို့တစ်ဦး multilayer ဆားကစ်ဘုတ်ပေါ်ထွန်း.
multilayer ပျဉ်ပြား fabricating ၏မူလရည်ရွယ်ချက်ရှုပ်ထွေးနှင့် / သို့မဟုတ်ဆူညံသံအထိခိုက်မခံအီလက်ထရောနစ်ဆားကစ်များအတွက်သင့်လျော်သောလမ်းကြောင်းလမ်းကြောင်းရွေးချယ်ခြင်းတွင်ပိုမိုလွတ်လပ်ခွင့်ပေးထို့ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါ multilayer ဝါယာကြိုးဘုတ်အဖွဲ့ကအနည်းဆုံးသုံးကူးမှုအလွှာရှိပါတယ်, ပြင်မျက်နှာပြင်ပေါ်မှာနှစ်ခုသော, နှင့်ကျန်ရှိသောတ insulator တွင်လည်းဘုတ်အဖွဲ့ထဲမှာဖန်တီးဖြစ်ပါတယ်. သူတို့ကိုအကြားလျှပ်စစ်ဆက်သွယ်မှုကိုများသောအားဖြင့်ဘုတ်အဖွဲ့၏လက်ဝါးကပ်တိုင်အပိုင်းများတွင်အပေါက်များမှတစ်ဆင့်ချထားတဲ့ခြင်းဖြင့်အောင်မြင်နေသည်. မဟုတ်ရင်ဖော်ပြထားမဟုတ်လျှင်, တစ်ဦး multilayer ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်, နှစ်ဆ panel ကိုနဲ့တူ, ပုံမှန်အားဖြင့်အပေါက်တစ်ပေါက်ပန်းကန်မှတဆင့်ချထားတဲ့ဖြစ်ပါတယ်.
တစ်ဦးက Multi-အလွှာဟာယုံကြည်စိတ်ချရသော Pre-set ကိုအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်မှုများနှင့်အတူတစ်ဦးချင်းစီကတခြားအပေါ်နှစ်ခုသို့မဟုတ်နှစ်ခုထက်ပိုသောဆားကစ် stacking အားဖြင့်လုပ်ကြံသည်ကို. လူအပေါင်းတို့သည်အလွှာအတူတကွရှင်းပြီပြီမတိုင်မီတူးဖော်ခြင်းနှင့်များတွင်လည်းကောင်းပြီးစီးခဲ့ပြီကတည်းက, ဒီ technique ကိုရှေ့ဦးစွာ မှစ. အစဉ်အလာကုန်ထုတ်လုပ်မှုဖြစ်စဉ်ကိုချိုးဖောက်ထားပါတယ်. နားမှာနှစ်ခုအလွှာရိုးရာနှစ်ဆပြား၏ဖွင့်ထားကြပါတယ်, ပြင်အလွှာမတူကြစဉ်, သူတို့ကသီးခြားတစ်ခုတည်းပြား၏ဖွင့်ထားကြပါတယ်. ကိုလှိမ့မတိုင်မီက, အတွင်းပိုင်းအလွှာတူးလိမ့်မည်, မှတဆင့်-ပေါက်ချထားတဲ့, လွှဲပြောင်း patterned, ဖွံ့ဖြိုးပြီး, နှင့်ခြစ်ရာမပေါ်. တူးခံရဖို့ပြင် layer သည်မှတဆင့်အပေါက်၏အတွင်းအစွန်းမှာမျှမျှတတကြေးနီလက်စွပ်ဖွဲ့စည်းရန်ကဲ့သို့သောလမ်းအတွက်ချထားတဲ့သောအချက်ပြမှုအလွှာဖြစ်ပါသည်. အဆိုပါအလွှာထို့နောက်လှိုင်းဂဟေသုံးပြီးအပြန်အလှန်ချိတ်ဆက်နိုင်မယ့် Multi-အလွှာဖွဲ့စည်းရန်အတူတကွ laminated နေကြတယ် (အစိတ်အပိုင်းများအကြား).
Rolling တစ်ဟိုက်ဒရောလစ်သတင်းစာတွင်သို့မဟုတ်တစ်ဦး overpressure အခန်းထဲက၌ပြစ်မှားမိစေခြင်းငှါ (autoclave). ယင်းဟိုက်ဒရောလစ်စာနယ်ဇင်းများတွင်, အဆိုပါပြင်ဆင်ထားပစ္စည်း (ဖိအား stack များအတွက်) အအေးသို့မဟုတ် preheated ဖိအားအောက်တွင်ထား (မြင့်မားတဲ့ဖန်ခွက်အကူးအပြောင်းအပူချိန်ပစ္စည်း၏အပူချိန်မှာထား 170-180 °ကို C). အဆိုပါဖန်အကူးအပြောင်းအပူချိန် amorphous ပေါ်လီမာ၏ amorphous ဒေသဖြစ်ပါသည် (ဗဓေလသစ်) တစ်တင်းကျပ်ကနေပြောင်းလဲသောပုံဆောင်ခဲပေါ်လီမာ၏တစ်ခုသို့မဟုတ်တစျပိုငျးကို, တစ်ဦး viscous ဖို့အတော်လေးကြွပ်ဆတ်ပြည်နယ်, rubbery အပူချိန်.
multi-layer ကိုပျဉ်ပြားပရော်ဖက်ရှင်နယ်အီလက်ထရောနစ်ပစ္စည်းကိရိယာများအတွက်အသုံးပြုမှုထဲသို့သွင်းထားကြသည် (ကွန်ပြူတာများ, စစ်ရေးပစ္စည်းကိရိယာများ), အထူးသဖြင့်အလေးချိန်နဲ့ volume Overload ၏ဖြစ်ရပ်အတွက်. သို့သျောလညျး, ဒီအာကာသတိုးနှင့်အလေးချိန်လျှော့ချရေးတို့အတွက်လဲလှယ်အတွက် multilayer ဆားကစ်ဘုတ်၏ကုန်ကျစရိတ်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်သာအောင်မြင်နိုင်ပါသည်. multi-layer ကိုပျဉ်ပြားမြန်နှုန်းမြင့် circuits များအတွက်လည်းအလွန်အသုံးဝင်သောများမှာ, အရာလမ်းကြောင်းဝါယာကြိုးမှပျဉ်ပြား၏နှစ်ယောက်ထက်ပိုအလွှာနှင့်အတူပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်၏ဒီဇိုင်နာများများကိုကြီးမားသောမြေပြင်နှင့်အာဏာဒေသများသည်.
ပြီးခဲ့တဲ့လက သုံးပြီး၏အကျိုးကျေးဇူးများဘာတွေလဲ" PCB ပုံနှိပ်ဆားကစ်ဘုတ်ပေါ်?
နောက်တစ်ခုအဆိုပါ PCB ဘုတ်အဖွဲ့ရဲ့အရောင်ကနေဘုတ်၏အရည်အသွေးကိုစစ်ကြောစီရင်